I-Thunderbird ngumxhasi wam we-imeyile ongagqibekanga. Kutheni ukuba ndisebenzisa i KDE? | Ubunlog
IPablinux | | software, Ubuntu
Sele kudlule iminyaka eli-10 okoko ndiyekile ukusebenzisa iWindows njengenkqubo yam ephambili. Ngoku ndinelaptop enenkqubo yeMicrosoft, kuba indala noko, khange indibize kakhulu (andizukufumana lukhulu ngokuyithengisa) kwaye ke ndinokuba neenkqubo ezintathu ezaziwayo ezisebenzayo. Kuba nam ndingumsebenzisi weApple kwaye andifuni kunika yonke idatha yam kuGoogle. Ndicinga ukuba ukufunda oku ngasentla unokuba sele ukrokrela kutheni ndisebenzisa i-thunderbird, i Umxhasi weposi weMozilla, Kwaye hayi Ukudibana kwi KDE.
Ukusuka ukuqala konyaka, Ndihlala ndithandana no KDE. Ndiyawuthanda umfanekiso wayo, ukhetho lwayo, usetyenziso lwayo, ubumanzi bayo ... kunye ahora Yonke into isebenza ngokugqibeleleyo. Ewe, phantse yonke into. Ukudibana kudibanisa iposi, ikhalenda, abafowunelwa, uluhlu lokwenza kunye nomfundi weRSS kwisicelo esinye, kodwa zimbini izinto ezenzekayo ngoku: kukho ingxaki yokuhambelana, umzekelo, iiakhawunti zeGmail, kwaye ndisebenzisa iGmail. Kwelinye icala, njengoko umphuhlisi we KDE endixelele, ukongeza iiakhawunti akuyona eyona nto ilula emhlabeni. Nangona engamanqaku amabini athembisa ukuphucula kwikamva, awalunganga ngoku.
1 I-Thunderbird iyahambelana neekhalenda zikaGoogle kunye neApple ngokusebenzisa izandiso
1.1 Sayina ungene
1.2 Iyahambelana neekhalenda ze-iCloud kunye nezikhumbuzo
2 I-Thunderbird ilungile kum, kodwa uKontact ufanelwe lithuba elitsha
I-Thunderbird iyahambelana neekhalenda zikaGoogle kunye neApple ngokusebenzisa izandiso
I-Thunderbird isuka eMozilla kwaye, njengesikhangeli sakho, inezandiso ezikhoyo. Eli licandelo lezimvo, ke ndiza kuchaza into endiyifunayo kunye nento endinikwa yiThunderbird:
Uyakwazi ukongeza i-Gmail.
Uyakwazi ukongeza i-iCloud Mail.
Inkxaso yeekhalenda ze-iCloud.
Ukuhambelana koQhagamshelo kuGoogle.
Uncedo lokongeza iiakhawunti.
Elinye lawona manqaku apho iThunderbird ingaphezulu kwesoftware ye-KDE, nangona ingekho kukhetho lukaMozilla kuphela, yile yongeza iakhawunti ye-imeyile faka nje igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha. Nangona sinako ukumisela amanye amanqaku, kwanele ukuzichonga ukuze iakhawunti yethu ye-imeyile ibonakale kwiqela lasekhohlo. Oku kuyinyani ngeGmail kunye ne-iCloud Mail, kunye neminye imimandla emininzi.
Iyahambelana neekhalenda ze-iCloud kunye nezikhumbuzo
Njengoko sendichazile, andiziva ndikhululekile ukunikezela ngedatha yam kwinkampani eyaziwayo ukuba iyisebenzisela inzuzo yabo. Olu luvo lomntu olukhokelele ekubeni ndisebenzise iCloud kunye neDuckDuckGo kuninzi kukhangelo lwam (ndingasathethi ke nge-Bang). I-Thunderbird ikwasibonisa iikhalenda zethu, ngokhetho lwasekhaya okanye ngokulukhetha kwiinkonzo zangaphandle. Ekuqaleni, ayihambelani neKhalenda kaGoogle okanye ikhalenda yeICloud, kodwa sinokufaka ezintathu izandiso eziya kuthi zisivumele ukuba sisebenzise zombini iikhalenda njengezikhumbuzi ze-iCloud. Izandiso zi "Umboneleli weKhalenda kaGoogle" yeKhalenda kaGoogle kunye ne "TbSync" + "Umboneleli weCalDAV kunye neCardDAV" ukuze bakwazi ukongeza nokulawula zombini iikhalenda ze-iCloud kunye nezikhumbuzo zabo. Ngawo onke amaxesha, into esiza kuyifumana iya kuba yikhalenda esinokuthi siyisebenzise kwaye siyiguqule.
I-Thunderbird ilungile kum, kodwa uKontact ufanelwe lithuba elitsha
Andizange ndiyithande iThunderbird, ngokuyinxenye ngenxa yoyilo lwayo. I-Thunderbird iphucule kakhulu malunga noku kwiinguqulelo zamva nje kwaye ndinokujongana nayo ngoku, kodwa njengomsebenzisi we KDE ndingathanda ukusebenzisa Ukudibanisa kuba ilunge ngakumbi ngokudityaniswa nayo yonke inkqubo yokusebenza. Umphuhlisi we KDE undixelele lonto basebenzela ukongeza iiakhawunti ngokulula Kwaye kuthiwa kwiinguqulelo ezizayo bayilungisile i-bug nge-Gmail, kodwa oko kuya kuba kwixesha elizayo kwaye ukuphuculwa kuya kuqala ukufika, kwangoko, kwinyanga ezayo.
Ngapha koko, ndiyazi ukuba kukho ezinye iindlela ezinje indaleko, Mailspring (eyaqala njenge UNilas) okanye iGeary, kodwa andizithandanga nanye kuzo njengeThunderbird yangoku, ngokuyinxenye kuba andiyithandi uyilo lwabo. Kananjalo, ukukwazi ukubona zonke iikhalenda kunye nezikhumbuzo zam njengoko ndizibona kwisindululo sikaMozilla yinto enditsalela kakhulu. Kwaye wena? Ngaba unamathela kwiThunderbird eza ngokungagqibekanga ku-Ubuntu okanye usebenzisa umxhasi wemeyile eyahlukileyo kunye neekhalenda?
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » software » Kutheni njengomsebenzisi we KDE ndisebenzise iThunderbird kwakhona [Uluvo]
Mholo. Bendihlala ndisebenzisa isikhangeli ukujonga nokuthumela ii-imeyile, nangona kunjalo ibiyingxaki ukungena nokuphuma. Kungenxa yoko le nto ndikhuthazwayo ukuba ndisebenzise umxhasi wemeyile yeThunderbird kunye nolwandiso lokudibanisa abafowunelwa, ngokutsho, omnye uyamangaliswa.
Kwam iindudumo zihlala zikhetha kuqala. Ngeli xesha ndihamba kwimeko efanayo xa ndiqala ukusebenzisa i-KDE, umphathi wemeyile wayekuphela kwesicelo kuyo yonke le nkqubo ukusukela kwimbono yam eshiye kakhulu ukuba kungafunwa ngenxa yeengxaki ezindibangele zona ngeakhawunti ye-GMAIL kunye ezimbi zingqamanisa iiposi.
Molo bafana. Ndisebenzisa imeko yeGnome kunye neeseva zeposi ze-Evolution. Andililo ingcali kwaye ibango lam kuphela kukuba yonke into ilula kwaye indibaniselwano echaziweyo iyahlangabezana nezi mfuno. INTO endigqibe kuyo kwi-Evolution kukuba iyahambelana neKhalenda yeGnome.
I-RawTherapee 5.7, uyisebenzisa kanjani le nguqulo intsha kwi-Ubuntu